Waa kuma Muuse Biixi Madaxweynaha Cusub Somaliland? - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Waa kuma Muuse Biixi Madaxweynaha Cusub Somaliland?
Waa kuma Muuse Biixi Madaxweynaha Cusub Somaliland?
November 21, 2017 admin901
Waxa uu sheegay in uu waxbarashadiisii Quraanka, dugsiga hoose iyo dhexeba uu ku qaatay magaalada Hargeysa, Dugsiga sare ee Cammuud ee Borama ayuu ka qalin jebiyay sanadkii 1970-kii, Ka dibna wuxuu ku biiray ciidamada cirka ee Soomaaliya.
Muuse Biixi Cabdi ayaa bishii May sanadkii 1985 waxa uu ku biiray jabhaddii SNM ee dagaalka kula jirtay dawladdii Maxamed siyaad Barre, waxaana markii dawladdii dhexe ee Soomaaliya burburtay ee Somaliland-na ay ku dhawaaqday goonni isu taagga, ayaa wuxuu noqday 1993-dii wasiirkii Arrimaha Gudaha Somaliland ee dawladdii Madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, Wuxuuna wasaaraddaasi hayay muddo oo uu ku soo caan baxay.
Muse Biixi wuxuu ka mid noqday gudigii fulinta, markii la aas aasay Xisbiga Kulmiye bishii May 2002-dii, isagoo Guddoomiye ku xigeenka Koowaad loo doortay 2008, waxaa Guddoomiyaha xisbiga talada haya ee Kulmiye loo doortay 10-ka November 2015-kii, kadib shirweynihii xisbiga, waxaana loo xushay in uu noqdo musharraxa xisbiga.